Nagu saabsan - TRUE Power Technology Co., Ltd.
XAQIIQADA AWOODDA FARSAMADA CO., XADDIDAN
TRUE Power Technology Co., Ltd, oo daboolaya aag dhan 8,000 oo mitir murabac ah, oo ah shirkad hi-teknoloji ah oo ku takhasustay cilmi-baarista, soo-saarka iyo iibinta dhammaan noocyada baytariyada dib-u-buuxin kara iyo xeedho, Li-polymer, Li-ion, Ni-mh, Ni-cd batteriga, gaar ahaan loogu talagalay Xirmooyinka batari-loogu talagalay oo loogu talagalay naqshadeynta xayeysiinta. Iyada oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah ee dhoofinta wax soo saarka iyo ODM / OEM, alaabooyinkeenna loo iibiyo Yurub, Ameerika, Japan iyo dalal kale. Waxaan u noqonay shirkad beddesha bateriga in ka badan 20 nooc oo si fiican looga yaqaan adduunka. Shirkadeena waxaa si adag loogu shaqeeyaa iyadoo la raacayo ISO 9001.Hadda la joogo, wax soo saarkeenna maalinlaha ah ee baytariyada waa 100,000.
Si loo hubiyo in heerarka tayada wanaagsan la ilaaliyo, waxaan hirgelinay nidaam QC ah oo si adag ula jaan qaadaya heerarka caalamiga ah. Intaa waxaa sii dheer waxaan haynaa xariiq wax soo saar oo dhameystiran, tas-hiilaad casri ah oo lagu baaro baytariyada iyo mashiinno si otomaatig ah u shaqeynaya si loo hubiyo waxqabadka batteriga.
waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay nala shaqeeyaan. Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir dhow oo ganacsi aan kula yeelano mustaqbalka dhow.
12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, 18650 Nimh, 3.7 Batariga dib loo buuxin karo, Li Battery, Batariga Lithium Ion Polymer, Dhammaan Alaabooyinka